Home / समाचार / लापरबाही कहिलेसम्म? कास्की गहतेमा बिजुलीको करेन्ट बारीमा, साग टिप्न गएकी बालिकाको मृत्यु
लापरबाही कहिलेसम्म? कास्की गहतेमा बिजुलीको करेन्ट बारीमा, साग टिप्न गएकी बालिकाको मृत्यु 0
साँझको खानाको लागि बारीमा साग टिप्न जाने क्रममा आईतबार साँझ बारीमै प्रवाह भईरहेको करेन्टका कारण मृत्यु भएको हो । साग टिप्न गएकी बहिनी नफर्किएपछि दिदी केम कुमारी बारीमा हेर्न जाँदा उनी मृत अवस्थामा भेटिएको आफन्त समेत रहेका स्थानीय सरस्वती कुञ्ज निमाविका शिक्षक उत्तर गुरुङले जानकारी दिए । मृतक बालिका एलिशा सोहि स्कूलबाट आठ कक्षा पास गरी गोर्जे स्थित हिमालय हिमालय माविमा कक्षा नौ मा अध्ययनरत थिईन् । यमबहादुर र हेमकुमारीकी कान्छी छोरी एलिशाका एक दाइ र दुई दिदी छन् ।
ठ्याक्कै एक हप्ता अघि पुस ३ गते लप्सी बोट ढलेर तारमा क्षति पुगेको थियो । तार भुईंमा लत्रेपछि आगो नै लागेको थियो । त्यसले चार वटा पोलमा असर पुगेको थियो । गुरुङका अनुसार ६ जना प्राविधिकले साँझसम्म मर्मत गरेपछि भयो भनेर अधेंरो भएपछि हिँडेका थिए । ‘तार उताबाट तानियो, धेरै तन्कियो यसकै कारण हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । खिर्रा रुख पनि काट्या हो नत्र अहिले यस्तो घटना कसरी हुन्छ ? पहिले पनि त्यही बारीमा गएकै हो ।’ उनले भने ।
यसअघि, ठूलो सौराहा सानो गाउँ आसपासमा बिजुली पोलमै स्यालहरु डढेर मरेको, दिउँसै पनि तारहरु पड्केको घटना भएका छन् । मादी ८ नागीधारमा मोबाईल चार्ज गर्ने क्रममा एक पुरुष र गहतेकै सानो गाउँमा आश बहादुर गुरुङ बिजुलीको तारमा परेको चट्याङका कारण ज्यान गुमाईसकेका छन् ।
यस्तै, गत साउन २६ गते पोखरा ११ रानीपौवामासडक माथि टांगिएको करेन्टको तार एक्कासी गुडिरहेको बाईक माथि खस्दा पोखरा लेखनाथ २० भलाम विष्णु बस्ताकोटी गम्भीर घाइते भएकोमा उपचारकै क्रममा १७ कार्तिकमा मृत्यु भएको थियो । बिजुलीको हाइटेन्सन लाईनलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत प्राधिकरण चुकेको छ । यस्तो लापरबाहीले आम नागरिक त्रसित छन् ।